XB Media Myanmar – Page2– Daily News, Tech , Health
အဆိုတော်ရင်ဂိုမှ သားဖြစ် သူ ဟန်ထူးလွင် (ခေါ်) ကျားပေါက် အား အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ကြောင်းကြေ ညာ
ယနေ့အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အဆိုတော် ရင်ဂိုမှ သားဖြစ်သူ Big Bag အဖွဲ့ဝင် အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ခေါ်) ကျားပေါက် ဆရာကျားကို အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာစာထဲတွင် သားဖြစ်သူမောင်ဟန်ထူးလွင်သည် မိဘတို့ရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုကို နားမထောင်ဘဲ မိမိသဘော ဆန္ဒအလျောက်နေအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားပါသဖြင့် ယနေ့မှစ သားအဖြစ်မှ အမွေ ပြတ် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါကြောင်း နှင့် နောက် နောင် သားဖြစ်သူ ဟန်ထူးလွင်နှင့် ပတ်သတ်သော ကိစ္စအဝဝအား တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာအပ်ပါသည်ဟု ဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။ အဆိုတော်ရင်ဂို နှင့် သားဖြစ်သူ ဟန်ထူးလွင်တို့ဟာ အရမ်းကိုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခဲ့ကြတဲ့ သားအဖတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဖျော် ဖြေပွဲတွေမှာလည်း သီချင်းတွေအတူတူ ဆိုဖူးကြပါတယ်။ အဆိုတော် ရင်ဂိုက သားဖြစ်သူနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင်မပြေမှု သို့မဟုတ် အခြေအနေတ ချို့ကြောင့် အခုလို အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေက သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ [Zawgyi] ယေန႔ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုေတာ္ ရင္ဂိုမွ သားျဖစ္သူ Big Bag အဖြဲ႕ဝင္…
သဘာဝအလှတရားတွေကို နောက်ခံ ထား ပြီး လွတ် လပ် ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင် လေးနဲ့ နုပျိုနေ တဲ့အပြင် ရင် သွေးလေးကြောင့် ပိုမိုပျော်ရွှင်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အောန်ဆိုင်း
တိုင်းရင်းသူလေး အောန်ဆိုင်းကတော့ မော်လ်ဒယ်လောကမှာ ထိပ်တန်းကနေ အောင်မြင်နေပြီး ရှိုးပွဲတိုင်းရဲ့ စင် မြင့်တွေ ထက်မှာလ ည်း မပါမဖြစ်တဲ့ စူပါမော်ဒယ်လ်အဖြစ်နဲ့ မော်လ်ဒယ်လောကမှာ အောင်မြင်နေသူလေးပါ ။ သူမကတော့ သူမချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့ လက်ထ ပ်ပြီး နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မကြာခင်မှာပဲ အောန်ဆိုင်း မိခင်ဘဝကိုရောက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အောန်ဆိုင်းက လူ့လောကထဲကို ရောက်ရှိလာတော့မယ့် ရင်သွေးလေးအတွက် ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အောန်ဆိုင်းက အားကစားလိုက်စားသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး အမြဲလိုလိုတက်ကြွနေလေ့ရှိတဲ့သူပါ။ အမြဲ လိုလို ဖက်ရှင်ကျ ကျနဲ့ အ ဆီပိုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် မိန်းကလေးအများစုကြွေနေရတာပါ ။ အောန်ဆိုင်းဟာ ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ တစ်မျိုးလေးဆွဲဆောင်မှုပို စေတဲ့ သူလေး ပါ။ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရချိန်မှာတောင် နုပျိုနေတဲ့အပြင် အရင်ကထက်တောင် ပိုလှလာပါသေးတယ်။လတ်တလောမှာ တော့ အောန်ဆိုင်းက သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ မကြာခဏ မျှဝေပေးလေ့ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း အောန်ဆိုင်းက သဘာဝအလှတရားတွေကိုနောက်ခံထားပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ နုပျိုနေတဲ့အပြင် ရင် သွေးလေးကြောင့် ပိုမိုပျော်ရွှင်နေရ ပါတယ်ဆိုပြီး…
ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သင်္ကန်းနဲ့ ငှက် သိုက် တွေကပ်လှူခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီး ချော လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ လူငယ်ပီပီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်တတ်ပေမဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးတွေမှာလည်း စိတ်အားထက်သန်လှတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်နေ့မှာ ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့ကြောင်းသူရဲ့ လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က အောက်တိုဘာလ(၁၇)ရက်နေ့ကတည်းက စံရတီမိုးမြင့်ကဆရာတော်ကြီး သတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး တောထဲမှာအိပ်ရတာတွေကိုတောင်မမှုဘဲ ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမြှော်ချင်တဲ့ ဆန္ဒက အရမ်း ပြင်းပြနေခဲ့တာကြောင့် အခုလို ဖူးမြှော်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဆရာတော်ကြီးကိုလည်း သင်္ကန်းနဲ့ ဆရာတော်ကြီး အားရှိစေဖို့ ငှက်သိုက်တွေလည်း စံရတီမိုးမြင့်ကလှူဒါန်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ Cele Zone ပရိသတ်ကြီးရေ ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမြှော်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးပြည့်ဝခဲ့တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖူးမျှော် ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းပုံလေးတွေကိုပါမျှဝေထားခဲ့ပါသေးတယ်။ Source – San Yati Moe Myint [zawgyi] စံရတီမိုးျမင့္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးခ်စ္ခင္မႈကိုအျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမာ္ ဒယ္လ္မင္းသမီး ေခ်ာ ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ စံရတီမိုးျမင့္ကေတာ့ လူငယ္ပီပီလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနထိုင္တတ္ေပမဲ့ ဘာသာေရး နဲ႔ကုသို လ္ေရးေတြမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္လွတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ စံရတီမိုးျမင့္ကေတာ့ ဒီေန႔ ေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔မွာ ေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို သြားေရာက္ဖူးေျ မႇာ္ ခဲ့ေၾကာင္းသူရဲ႕ လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က…
ပိုမိုပုံပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဂေဟာအသစ် လေး ကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ပရဟိတမင်းသမီးကြီးခိုင်နှင်းဝေကတော့ လက်ရှိမှာ သူ့မွေးစားပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကလေး တွေအတွက် ဂေဟာအသစ်လေးဆောက်နေတာကပြီးလုနီးပါးရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ခိုးကိုးရာမဲ့ကလေးတွေကို ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ရာကနေ လက်ရှိမှာဆို ကလေးတွေများစွာဂေဟာမှာရှိနေတာကြောင့် ဂေဟာအဟောင်းလေးက ကျဉ်းတဲ့အတွက် ဂေဟာအသစ်ကလေးဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ဂေဟာအသစ်ကလည်း ပြီးလုနီးပါးဖြစ်နေခဲ့ပြီး တစ်ဆထက်တစ်ဆ ပိုမိုပြီး ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဂေဟာကိုကြည့်ပြီး ခိုင် နှင်း ဝေက သူ့ရဲ့ကလေးတွေအတွက် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်နေနိုင်တော့မယ့်အရေးကိုတွေးပြီး ပီတိတွေဖြစ်ကာကြည်နူးပျော်ရွှင်နေမိကြောင်းလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ရင်ဖွင့်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ အခုလို ကလေးတွေအပေါ်မှာ မိခင်အရင်းသဖွယ်မေတ္တာအပြည့်အဝထားနိုင်ပြီး ကလေးတွေအတွက် အမြဲတွေးပေး တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ မိခင်စိတ်ကို ချီးကျူးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ တကယ်ကိုပဲခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ကလေးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ တရားကလည်း ချီးကျူးထိုက်တာလည်းအမှန်ပါပဲနော်။ Source – Khine Hnin Wai [zawgyi] ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ပရဟိတမင္းသမီးႀကီးခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ လက္ရွိမွာ သူ႔ေမြးစားျ ပဳ စုေ စာ င့္ေရွာက္ေနတဲ့ကေလး ေတြအတြက္ ေဂဟာအသစ္ေလးေဆာက္ေနတာကၿပီးလုနီးပါးရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ခိုးကိုးရာမဲ့ကေလးေတြကို ေခၚယူေမြးစားခဲ့ရာကေန လက္ရွိမွာဆို ကေလးေတြမ်ားစြာေဂဟာမွာရွိေနတာေၾကာင့္ ေဂဟာ အေဟာင္းေလးက က်ဥ္းတဲ့အတြက္ ေဂဟာအသစ္ကေလးေဆာက္လုပ္ခဲ့တာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေဂဟာအသစ္ကလည္း ၿပီးလုနီးပါးျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး တစ္ဆထက္တစ္ဆ ပိုမိုၿပီး ႐ုပ္လုံးေပၚလာၿပီျဖစ္တဲ့ ေဂဟာကိုၾက ည့္ၿပီး…
လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာ က ပြည်သူ့သရုပ် ဆောင် မင်းမော်ကွန်း ရဲ့ အချစ်ဆုံး တောသားလေး
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းမော်ကွန်း လို့ပြောလို က်တာနဲ့ အမြဲတမ်းအ ရွယ်တင်နု ပျိုနေပြီး သရုပ်ဆော င်အင်မ တန်ပိုင်နိုင် ထူးချွ န်တဲ့ နိုင်ငံ ကျော် မင်းသား ဆိုတာ ပရိတ်သတ်တို င်းက သိကြပါတယ်။ သူဟာ အခုဆိုရငျ အသကျ(၄၂)ရှိေ နပွီဖွ စျသောျလညျး ယခုခြိနျ ထိ ပရိတျသတျ မြားရဲ့ အားပေး ခစြျခငျမှုကို အတိုငျးထကျအ လှနျ ရရှိနသေူ တစျဦးဖွစျ ပါတယျ။ သူဟာ ဒီကာလ မှာ နိုင်ငံတော်အြ ကည်ညိုပျက်ေ စမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နှင့် တရားစွဲဆိုခံ ထားရတာြ ဖစ်ပြီး မိသားစုနှင့်အတူတကွ ရှောင် တိမ်း နေ ရတာ ကြာမြ င့်နေပြီဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်အား လုံးက သတိရလွမ်း ဆွတ်နေကြပါတယ်။ ယမနျနေ့ အောကျ တိုဘာ(၁)ရကျနေ့က သူဟာ သူ့ရဲ့ Facebook စာမကြျနှာမှာ သူ့သားအ ငယျဆုံးလေး အကွောငျးကို “ဘယျနရောေ ရာကျရောကျပြောျ အောငျနတေတျ တဲ့သူ့ကိုပွနျအ တုယူရပါ တယျ” လို့ စိတျမကော ငျးဖွစျဖှယျရေး သားဖောျပွထား ပါတယျ။ ကလေးဆို တဲ့အတိုငျး…
ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီး သီရိဒုံမှ နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သည့် ASEAN’s Outstanding Teacher Award ဆုကိုရရှိ သွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဆရာတစ်ယောက်
October 17, 2021 Bestie_Author
ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီး သီရိဒုံ (Princess Maha Chakri Sirindhorn) မှ ချီးမြှင့်တဲ့ ASEAN’s Outstanding Teacher Award ဆုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား လားရှိုးမြို့မှ ဆရာ Alex ခေါ် ဆရာဦးကျော်ဇင်အောင်မှ ရရှိသွားပါတယ် ASEAN’s Outstanding Teacher Award ဆုအတွက် ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ များပြားလှတဲ့ စံညွှန်းပုံစံတွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရွေးချယ်ခံရရင် ရရှိမယ့် ဆုကြေးငွေ ကလည်းတော်တော်လေးကို များပါတယ်။ ဆရာဦးကျော်ဇင်အောင်က အင်္ဂလိပ်စာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသင်အပြကောင်းလွန်းတဲ့အပြင် စစ်ဘေးရှောင် တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် အလှူငွေတွေ ကောက်ခံပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ စာတစ်ခုတည်းကိုပဲသင်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲ စစ်ဘေးရှောင်ဒေသက လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်ပါ ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဆရာတစ် ယောက်ပါ ။ သူ ရရှိမယ့် ဆုကြေးငွေထဲက ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ကိုလည်း စစ်ဘေးရှောင်တွေ အတွက် လှူဒါန်းသွားမယ်လို့ ဆရာ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက် နှာမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ထိုင်းတော်ဝင် မင်းသမီး ကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်တဲ့ အာရှရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆရာဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါ တယ်။ Credit mm load
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ လွတ်မြောက် နယ်မြေက မြနှင်းရည်လွင်
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေက မြနှင်းရည်လွင်…. သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ MRTV-4ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင် မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူကတော့ မင်းသမီးချောမြနှင်းရည်လွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အပင်ပန်းခံကာ လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှား မှုတွေ မှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ကာ အားလုံးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နဲ့ အမှုဖွင့် အရေးယူခံထားရတာဖြစ်ပြီးရှောင်တိမ်းနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ နေထိုင်နေပြီးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကတော့လွှတ်မြောက်နယ်​မြေသို့ရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်၊ သူမအနေနဲ့ လက်ရှိ ကိုဗစ်ရောဂါကူး စက်ခံ ထားရကြောင်းသိရပါတယ်၊ ပြည်သူတွေနဲ့ တသားတည်းရပ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းပါစေလို့ စုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်နော် ပရိသတ်တွေ လည်း စုတောင်းပေးကြပါအုန်းနော်။ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေက မြနှင်းရည်လွင်…. သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ MRTV-4ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ် ခင် မှု တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူကတော့ မင်းသမီးချောမြနှင်းရည်လွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အပင်ပန်းခံကာ လမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှား မှု တွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ကာ…
ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖူး မြှော် ခဲ့တဲ့ မေသက်ထားဆွေ တစ်ဖြစ်လဲ ဆရာလေး သောမာထေရီ
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာသံစဉ်တွေကို အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ပိုင်နိုင်စွာသီဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေးမေသက်ထားဆွေကိုတော့ ပရိ သတ် တွေကိ အထူတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ မေသက်ထားဆွေကတော့ လက်ရှိမှာ ဆရာလေးဝတ်ရဲ့ သာသနာ ပြုနေ ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်ရှိနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မေသက်ထားဆွေက ဆရာလေးဝတ်နဲ့ ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့ကြောင်း ပီတိဖြစ်စွာနဲ့ သူ့ရဲ့ လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ အခုလိုပဲမျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။”ဆရာလေးရဲ့ဆန္ဒပြည့်ခဲ့ဝပါပြီ။ ကျးဇူးတော်ရှင် မဟာဗောဓိ မြိုင်ဆရာ တော် ကြီးအား ယနေ့ သွားရောက်ဖူးမြော်၍ သင်္ကန်းကပ်လှူခဲ့ပါတယ်။” ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်း ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်း ကပ်လှူခွင့် ရရှိခဲ့ ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မေသက်ထားဆွေကတော့ အခုလို ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးခွင့်ရတဲ့အကျိုးကြောင့် “ဘုန်းဘုန်းကြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့ဝန်၊ခန္ဓာ့ဝန်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဘုရား။ ဘုန်းဘုန်းကြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါ စေဘုရား။”လို့ လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းထားခဲ့ပါသေးတယ်။ [zawgyi] ပရိသတ္ႀကီးေရ ျမန္မာသံစဥ္ေတြကို အ႐ြယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ ပိုင္ႏိုင္စြာသီဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္မေလးေမသက္ ထားေဆြကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြကိ အထူတလည္မိတ္ဆက္ေပးစရာလိုမယ္မထင္ပါဘူးေနာ္။ ေမသက္ထားေဆြကေတာ့ လက္ရွိမွာ ဆရာေလးဝတ္ရဲ႕ သာသနာျပဳေနခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္ရွိေနခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေမသက္ထားေဆြက ဆရာေလးဝတ္နဲ႔ ေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို သြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ခဲ့ေ ၾကာင္း ပီတိျဖစ္စြာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန အခုလိုပဲမွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။”ဆရာေလးရဲ႕ဆႏၵျ ပ…
ကျနော်တို့ ခံယူချက်နဲ့ အနုပညာတွေဟာ မဲနေမှန်းအ ခုမှ သိတယ်လို့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကိုဘင်
သရုပ်ဆောင် ကိုဘင်းက ‌တော့ဇာတ် ကားတွေမှာပါဝင် သရုပ်ဆော င်ရင်းသရုပ်ဆောင်ပြီပြင်လှတာကြောင့်ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့ချစ်ခင် အားပေး မှုကိုအခိုင်အ မာရရှိ ထားပါတ ယ်နော်။ အခုတစ်ခါ မှာဆိုရင်၊သရုပ် ‌ေဆာင်ကိုဘင်း ကကျနော်တို့ခံယူ ခက်နဲ့အနုပညာတွေဟာမဲနေမှန်း အခုမှသိတယ်လို့ဆိုပြီးအခုလိုပြော ပြလာခဲ့ပါ တယ်နော်။ သရုပျဆောငျ ကိုဘငျးကအငျး ၊ကနြောျတို့ခံယူခကြျနဲ့ အနုပညာေ တှဟာမဲနမှေနျးခုမှပဲ သိလိုကျရေ တာ့တယျမမကွူေ ရ၊အဲမမ ကွူကွူသငျးကို‌ပွောပွတာပါဆိုပွီးရေး သားဖောျပွထား ပါတယျ၊စာဖတျပရိတျ သတျကွီးမြားအ တှကျပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါ တယျနောျ။ [zawgyi] သ႐ုပ္ေဆာင္ ကိုဘင္းက ‌ေတာ့ဇာတ္ ကားေတြမွာပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာ င္ရင္းသ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီျပင္လွတာေၾကာင့္ပရိ တ္သတ္ေ တြရဲ႕ခ်စ္ခင္ အားေပး မႈကိုအခိုင္အ မာရရွိ ထားပါတ ယ္ေနာ္။ အခုတစ္ခါ မွာဆိုရင္၊သ႐ုပ္ ‌ေဆာင္ကိုဘင္း ကက်ေနာ္တို႔ခံယူ ခက္နဲ႔အႏုပညာေတြဟာမဲေနမွန္း အခုမွသိတယ္လို႔ဆိုၿပီးအခု လိုေျပာ ျပလာခဲ့ပါ တယ္ေနာ္။ သ႐ုပ်ေဆာင် ကိုဘင်းကအင်း ၊ကေျႏာ်တို႔ခံယူခၾက်နဲ႔ အႏုပညာေ တွဟာမဲနေမွန်းခုမွပဲ သိလိုက်ေရ တာ့တယ်မမကြဴေ ရ၊အဲမမ ကြဴကြဴသင်းကို‌ေပြာပြတာပါဆိုပြီးေရး သားေဖာ်ပြထား ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ် သတ်ကြီးျမားအ တွက်ပြန်လည်တ င် ဆက်ေပးလိုက်ပါ တယ်ေနာ်။